Ny paikady marketing amin'ny atiny B2B mahomby indrindra | Martech Zone
Nizara izahay Benchmark, tetibola ary fironana amin'ny marketing amin'ny marketing B2015B 2 ary koa ny paikady marketing votoaty malaza indrindra ampiasain'ny mpivarotra B2B. Fa inona ny paikady marketing atiny B2B mahomby indrindra?
Araka ny fandinihana, ny tsiambaratelo amin'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny atiny dia ny fanoratana ny paikadin'ny votoatinao ary mifikitra aminy. Nahita ihany koa fa ny mpivarotra atiny dia mamorona atiny maro dia maro saingy mbola miady mafy izy ireo hanaraka ny ROI, indrindra rehefa tsy manoratra ny paikadin'izy ireo. Ianao dia afaka vakio ny tatitra feno ho an'ny fikarohana rehetra amin'ny antsipiriany. Francois Matheiu, Uberflip
Ny sasantsasany amin'ireo fisongadinana izay ifanarahanay sy hitanay amin'ireo mpanjifanay:
Sary torohay nitombo be ny fampiasana. DK New Media dia namoaka am-polony ary marobe an-dàlam-pamolavolana ho an'ny mpanjifanay.
Hetsika eo amin'ny olona dia mandaitra izaitsizy, ampiasain'ny webinar sy horonan-tsary.
LinkedIn manohy ny loharano mahomby indrindra amin'ny fampiasana media sosialy.
famoronana, famokarana ary famarana ny fahombiazan'ny marketing amin'ny atiny dia manohy ny fanamby lehibe indrindra.
Tags: bilaogy b2bfanadihadiana tranga b2binfografika b2b atinymarketing amin'ny atiny b2bhetsika b2binfografika b2bhoronan-tsary marketing b2bhaino aman-jery sosialy b2bhoronan-tsary b2bb2b webcastwebinar b2bContent Marketinguberflip
Avadiho ho lasa Mobile, Web-Ready, Shareable collateral ny PDFs anao
7 Nov 2014 amin'ny 10:03 maraina
Misaotra nizara ny infographic Uberflip, nahafinaritra foana ny nanasongadinana ny Marketing TechBlog!